Kane Oo Mushaharka Loo Kordhinayo – Garsoore Sports
Kane Oo Mushaharka…
Kane Oo Mushaharka Loo Kordhinayo
Tottenham ayaa usoo bandhigi doonta Harry Kane mushahar kordhin gaareeysa £100,000 isbuucii si uu u sii joogo kooxda muddo dheer kaddib markii u dhaqaaqistii Manchester City ay ku guuldareysatay inay dhaqagasho, sida ay qortay The Sun.
Kabtanka xulka Ingiriiska ayaa si adag u doonayay inuu ku biiro kooxda heysata Premier League xagaagan, kaliya Spurs ayaa diiday dhammaan dalabyadii lagasoo gudbiyay isag, ugu dambeyntiina wuxuu go’aansaday inuu sii joogi doono waqooyiga London.
Haatan, Daniel Levy wuxuu dabcin doonaa xargaha boorsada si loo hubiyo in hoggaamiya kooxda, oo kaalinta labaad ka galay tartankii Euro 2020, uu sii joogo kooxda.
Spurs ayaa ka cabsi qabta in Kane oo seddex sano uga harsan tahay qandaraaskiisa isbuucii £230,000 oo giini uu isku dayi karo inuu ku qasbo kooxda inay iska iibiyaan bisha Janaayo ama dhammaadka xilli ciyaareedka.
Sidaa darteed waxay isku diyaarinayaan inay usoo bandhigaan £ 330,000 oo ginni toddobaadkii si ay isugu dayaan inay kooxda kusii hayaan ilaa sannadka 2027, wax yar kahor inta uusan noqon 34 sano jirsan.
Halkan ka aqriso sida uu u burburay iskudaygii Manchester City ee Harry Kane
Bakayoko Oo Markale Ku Laabanaya Milan